इलामको पुवाखोलामा २.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन शुरु « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
इलामको पुवाखोलामा २.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन शुरु
इलाम, २४ असोज । इलामको पुवाखोलामा निर्मित पुवाखोला–१ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादन शुरु भएको छ ।
उक्त आयोजना रु ७२ करोडको लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाका परियोजना प्रबन्धक उत्तम थापाले बताउनुभयो । पुवाखोलाको पानीलाई सदुपयोग गरी विद्युत् उत्पादनका लागि आयोजनाले शान्तिडाँडाबेंसीमा इन्टेक निर्माण गरी लामो पाइपलाइनबाट विद्युत् गृहसम्म पानी पु¥याएको छ ।
१०८ मिटर हेड रहेको पेनस्टक पाइपबाट विद्युत् गृहमा विद्युत् उत्पादन गरिएको हो । विद्युत् गृहदेखि उत्पादित विद्युत्लाई गोदकको सबस्टेसनसम्म ल्याएर राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्नका लागि ६.५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको जनाइएको छ ।
सामसङ जे ६ आयो नेपाली बजारमा, थाहा पाउनुहोस् कति छ बजार मुल्य ? के के छन् सुविधा ?
सामसङ जे६ स्मार्ट फोन नेपाली बजारमा आएको छ । ठूलो डिस्प्ले एरिया भएको ग्यालेक्सी जे६को
कञ्चनपुर, २९ असारः शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जले जासुसी क्यामेराको सहायताले चोरी शिकारमा संलग्नलाई पक्राउ गर्न थालेको
काठमाडौँ, २५ असार । विसं २०७४ फागुन २७ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान
करेन्ट लागेर दुईको मृत्यु, एक घाइते
लहान, २२ असारः करेन्ट लागेर सिरहाको छुट्टाछुटै स्थानमा आज दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने